Indlu yomndeni emaphethelweni engalo yolwandle - I-Airbnb
Indlu yomndeni emaphethelweni engalo yolwandle
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Caroline
I Gite des Goémoniers yindlu enkulu umndeni (100 m2), ekahle ukuhlala nabangani, elise Pouldouran ogwini unengalo kolwandle. I Ajonc ogwini 12 km, edolobheni ephakathi Tréguier 5 mns, Paimpol kanye ne-Ile de Bréhat pier ku-13 km, i-Sillon de Talbert kanye ne-Côte de Granit Rose ebangeni elingamakhilomitha angama-20, izindlela zokuhamba izintaba usuka endlini. Ungakwazi ukufinyelela, ngemva kwebhuloho lezinyawo lamapulangwe, ukuya osebeni lwe-Jaudy (inkundla yokudlala, umzila wokuqina, njll.).
Phansi, igumbi lokudlela elinekhishi elinempahla evulekile, izindlu zangasese, uveranda (indawo yokudlala yezingane) kanye negceke elinezimbali elingama-50 m2 lapho kukuhle ukuphumula ungabonwa.
Isitezi sokuqala sinamagumbi okulala amabili, elinye linombhede oyi-140, elinye linemibhede emi-2 yabantu abangabodwana, igumbi lokugezela elinendlu yangasese kanye negumbi lokuphumula elithokomele lomtapo wolwazi (i-TV, ihhovisi) elikumema ukuthi ufunde. Esitezi sesibili, ngaphansi kwama-eaves, ikamelo lokulala elikhulu elinombhede we-160, lilandelwa elinye elinezintambo (BZ 140) kanye nendlu yokugezela enendlu yangasese.
I-Gîte itholakala kumakhilomitha angu-12 ukusuka emabhishi amahle asePlougrescant, amakhilomitha angu-5 ukusuka edolobheni lasendulo laseTréguer, amakhilomitha angu-15 ukusuka ePaimpol kanye nogwayi lwase-Ile de Bréhat, ingasaphathwa eCôte de Granit Rose engaphansi kwamakhilomitha angu-20.
Angihlali lapho mina, kodwa vele ngihlala ngitholakala ngokugcwele enhla nomfula ukuze ngikusize ulungiselele ukuhlala kwakho futhi uphendule noma yimiphi imibuzo mayelana ne-gîte yethu. U-Elisa uzophendula imibuzo yakho ngesikhathi sokuhlala kwakho futhi ahlangane nawe lapho uhamba.
Ukuqashwa kwelineni okungeziwe (20 € umbhede ngamunye)
Uma ungafisi ukuhlanza i-supplement ye-40 € izocelwa kubantu abangu-4 no-70 € kubantu abangu-6
Angihlali lapho mina, kodwa vele ngihlala ngitholakala ngokugcwele enhla nomfula ukuze ngikusize ulungiselele ukuhlala kwakho futhi uphendule noma yimiphi imibuzo mayelana ne-gîte…